Luciano Pavarotti - Calaamadda Google ayaa isbeddelay maanta | Abuurista khadka tooska ah
Luciano Pavarotti - Calaamadda Google ayaa isbeddelay maanta
Abuurista khadka tooska ah | | General, logos
Maanta oo Jimce ah, Oktoobar 15, Google waxay nagu qancisay astaan ​​kale, oo lagu xusayo taariikhda dhalashada weyn ee Luciano Pavarotti ...
wax yar dib u eegis gaaban ...
Luciano Pavarotti (Modena, 12 bisha Oktoobar de 1935 - aqoonsi., Sebtember 6 de 2007).karnay Italiano, mid ka mid ah kuwa ugu caansan fannaaniinta casriga ah, labadaba adduunka ee Opera sida noocyo kale oo badan oo muusig ah. Si fiican loogu yaqaan riwaayadaha telefishanka, iyo mid ka mid ah Saddex kirayste, wadajir ahaan Plácido Domingo y Jose Carreras. Loo aqoonsaday inay samafalka, lacag aruurinta qaxooti iyo Red Cross, iyo in dhowr jeer lagu abaal mariyo.
Wuxuu ku dhashay duleedka Modena, waqooyiga Talyaaniga, waxaa dhalay Adele venturi, shaqaale warshad sigaarka, iyo Fernando Pavarotti, rootiga iyo tenor hiwaayadda, kaas oo kicisay Luciano inuu bilaabo waxbarashadiisa adduunka hees macaan. In kasta oo uu aad u jeclaa carruurnimadiisii, haddana qoyskiisu ma haysan awood dhaqaale; afarteeda xubnood ayaa isugu soo ururay guri laba qol ah. Sida laga soo xigtay Luciano, aabihiis wuxuu lahaa cod wanaagsan, laakiin wuxuu diiday suurtagalnimada inuu ku sii socdo xirfad heesasho sababo la xiriira neerfaha jilicsan. The Dagaalkii labaad ee aduunka reerka ku qasbay inay ka baxaan magaalada 1943, Sannadkii ku xigayna waxay ku qasbanaadeen inay qol ka kiraystaan ​​nin beeralay ah oo ku nool baadiyaha u dhow, halkaas oo uu Luciano yar ku soo koray xiisaha beeraha.
Saameyntiisii ​​ugu horreysay ee muusig wuxuu ka yimid cajaladihii aabihiis, inta badan shirkadihii caanka ahaa ee waqtigaas - Beniamino gigli, Giovanni martinelli, Tito Schipa y Enrico Caruso. Qiyaastii sagaal sano jir, wuxuu bilaabay inuu la gabyo aabihiis koox ka tirsan kaniisad yar oo maxalli ah. Sidoo kale yaraantiisii ​​wuxuu la qaatay casharro cod-qaadasho ah Professor Dondi iyo xaaskiisa, laakiin wuxuu had iyo jeer muhiimad yar siiyaa labada.
Ka dib wixii sida muuqata ahaa carruurnimada caadiga ah ee xiisaha caadiga ah u leh isboortiga - kiiska Luciano, the kubadda cagta in ka badan dadka kale- ka qalin Magistrale Scuola, oo la soo gudboonaatay jahwareerka doorashada xirfadeed. Wuxuu xiiseynayay inuu ku raadsado xirfad kubada cagta ah booska goolhayaha, laakiin hooyadiis ayaa ku qancisay inuu noqdo macalin. Kadib wuxuu ku tababbaray dugsi hoose muddo labo sano ah, laakiin ugu dambeyntiina wuxuu u oggolaaday xiisihiisa muusikada inuu guuleysto. Markuu garwaaqsaday halista arrintani leedahay, aabihiis ayaa si cagajiid ah u oggolaaday, isagoo oggolaaday in Luciano uu heli doono qol iyo guddi illaa uu 30 sano ka gaarayo, haddii uusan ku guuleysan da'daasna, wuxuu iskiis nolol u heli doonaa. La taliyayaashiisii ​​farshaxanka bel canto waxay ahaayeen Arrigo Pola y Ettore Campogalliani.
Markii ugu horreysay ee uu fagaaraha ka soo muuqdo isagoo heesaya wuxuu ka mid ahaa heesta kooxda Teatro de la Comuna, Modena, ka dibna La Coral de Gioacchino rossini, halkaas oo uu ku muujiyay tayadiisa. Lagu soo bandhigay Abriil 29 de 1961, sida Rodolfo oo ku jira opera La bohème de Puccini, oo ku taal Reggio Emilia Opera Palace. Haddii tani ka dhigtay inuu kasbado caannimo badan, wuxuu kasbaday wax badan markii uu gabay doorka Tonio ee opera Gabadha ciidanka de Gaetano donizetti iyada oo adag oo sagaal-note ah aria xabadka samee. Tani waxay ka dhigtay isaga mid istaahila inuu ka soo muuqdo jeldiga wargeys Mareykan ah The New York Times.
Bass naxaas ah ee Luciano Pavarotti ayaa lagu abuuray 1987 by Serge mangin
Qaabkiisa muusigga caanka ah, wuxuu duubay heesayaal Eros Ramazzotti, Micida, Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Michael Jackson , iyo mid aan horay loo arag, oo reer Brazil ah Caetano Veloso, Argentina Mercedes sosa iyo kooxda dhagaxa irish U2. Iyada oo asxaabtiisa iyo asxaabtiisa, kiraystayaasha Isbaanishka Plácido Domingo y Jose Carreras, waxay sameysay seddexdii Saddexda Kireyste (Saddexda Kireyste). Wuxuu duubay opera badan oo disk ah, halkaas oo shaqadiisu ay la muuqato Joan Sutherland iyo kirishboyga Hindiya Zubin Mehta.
Noloshiisa gaarka ah, Luciano Pavarotti wuxuu si weyn u jeclaa kubada cagta, rinjiyeynta iyo fardaha. Wuxuu ku biiray masiirkiisa, muddo 34 sano ah, oo leh Kastamka Verona, oo uu isagu dhalay saddex gabdhood -Lorenza, Cristina iyo Giuliana-, laakiin the Diisambar 13 de 2003 markale ayuu guursaday kaaliyihiisii, Nicoletta Mantovani, 30 sano ka yar isaga oo ay la socoto wuxuu lahaa gabadhiisa afraad -Alice-.
Dhowr sano oo xiriir ah ka 1991, Pavarotti ayaa ka jawaabey baaqii ururka War Child, si lacag loogu ururiyo dhismaha xarunta daaweynta muusikada ee Inta badan. Sidan oo kale, riwaayado ayaa sannad walba lagu abaabulaa Modena iyadoo cinwaankeedu yahay "Luciano Pavarotti iyo saaxiibbadiis", halkaasoo shakhsiyaad kale oo muusig caalami ah iyaguna ka qayb galeen, sida Anastacia, halkaasoo lacago looga uruuriyo sababo iyo faa'iidooyin kala duwan oo loogu talagalay wiilasha iyo ragga, oo laga kala keenay adduunka.
Bishii oktoobar 2003 Pavarotti wuxuu ku dhawaaqay in Peruvian-ka Juan Diego Flórez noqon lahaa bedelkiisa sida heesaha opera.
Pavarotti wuxuu aad ugu baahnaa tiyaatarada aduunka ilaa uu ka fariistay Opera Magaalada New York, Bishii Maarso ee 2004, halkaas oo uu ku ciyaaray doorka rinjiyeynta Mario Cavaradossi gudaha Tosca, ee Giacomo Puccini.
Meey dhexdeeda 2004, ka hor dhalashadiisii ​​70-aad, mulkiilaha ayaa ku dhawaaqay Safarkii macasalaamaynta oo ka kooban 40 riwaayadood oo adduunka oo dhan ah, si loogu sagootiyo kuwa daacadda u ah heestiisa. In kasta oo ka bixitaankani, bishii Febraayo 2006 fasiray aria Nessun dorma, ee Turandot, xirnaanshaha xafladii caleema saarka ee Olombikada Jiilaalka 2006 garoonka Olympic Stadium ee Turin.
Nasiib darrose, "The Goodbye Tour" ayaa loo hakiyay qalliinka dhabarka bilowgiisa 2006 iyo markii uu isu diyaarinayay inuu baxo New York Si uu dib ugu bilaabo socdaalkiisii ​​macasalaameynta adduunka, waxaa laga helay buro xun oo ku taal beeryarada. Waxaa lagu qalay isbitaal New York, 7 bisha Luuliyo de 2006 oo riwaayadihiisii ​​oo dhan waa la joojiyay xaaladdiisa caafimaad ee aadka u jilicsan, waxaa sababay a oof wareen qalliinka kadib.
Bilowga dhamaadka ayaa lagu dhawaaqay August 8 de 2007, markii uu isbitaalka la dhigay dhibbane "xaalad qandho leh", iyo dhibaatooyinka neef mareenka, si kastaba ha noqotee, rajo ayaa soo kabatay, ka dib markii uu ka soo baxay rugta caafimaadka maalintii August 25 de 2007, si loo sii wado kuweekada guriga.
El Sebtember 6 del 2007, wuxuu ku dhintay guriga dartiis kansarka naasaha.
Xaflada aaska waxaa lagu qabtay magaaladiisii ​​iyadoo uu goobjoog ka ahaa raiisul wasaaraha Talyaaniga. Romano Prodi, Wasiirka dhaqanka Francesco Rutelli, agaasimaha filimka talyaaniga Franco Zeffirelli iyo xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay, Kofi Annan. Sidoo kale ka soo qeyb galka xaflada waxaa hogaaminayay U2, Bono, sida fannaaniinta Zucchero Fornaciari y Laura Pausini.
Albaabka laga soo galo masska waxaa weheliyey soprano bulgarian Raina Kabaivanska, yaa gabyay Ave María del Otello de Verdi. Inta lagu guda jiro bixinta, ciyaaryahanka biibiile Andre Griminelli taabtay mawduuca ah Orpheus iyo Euridice, ee Gluck. Wadajirka waxaa weheliyay codka Andrea Bocelli, yaa ciyaaray Ave verum corpus de Mozart.
Kireystaha waxaa lagu aasay qabuuraha Montale Rangote agagaarka gurigeeda, duleedka magaalada, halkaas oo ay ku aasan yihiin waalidkeed iyo wiilkeeda Riccardo, oo dhintay waxyar ka hor intaanay dhalan 2003.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Luciano Pavarotti - Calaamadda Google ayaa isbeddelay maanta
Astaamo - Xidho in kabadan 215 astaamo Bilaash ah
Google - Naqshadeeyaha astaanta Google